Galmee bilbila mobaayila haaraa irratti qabxiilee beekuu qabnu keessaa - BBC News Afaan Oromoo
Galmee bilbila mobaayila haaraa irratti qabxiilee beekuu qabnu keessaa
Madda suuraa, Ethio telecom
Dhaabbatni Itiyootelecom baatii Fulbaana 14, 2017 irraa jalqabee maamiltoota isaatiif tajaajila 'qafoo' bilbila mobaayila maamiltoota isaa galmeessuu (Equipment Identity Registration System - EIRS) dhiheessee ture.
Akka ibsi dhaabbatichaa jedhutti, tajaajilichi biyyattiidhaaf tajaajila telekoomii ammayyaawaa dhiyeessuufi dabalatee tajaajila si'ataa maamiltootaaf kennuuf akkasumas gara icciitii (security) fi galii biyyattii utubuuf akka ta'edha.
Kana maleees, Tajaajilli -EIRS kun mi'oota (gadgets) seeraan ala gahiinsa tajaajila Itiyoo telekoom (ethiotelecom network coverage) keessatti hojjachaa jiran kan ugguru (block) dha, ammas qafoo fakkeeffamee hojjatameefi qulqullina gadi-bu'aa akka dhabamsiisutti kan dhiyaatedha jedha dhabbatichi.
Akka tajaajilamtoonni jedhanitti, yeroo ammaa kana akkaataa bilbila haaraa bitanii itti fayyadaman (network ethio-telecom) irratti galmeessisuu danda'an waan hin beekneef yookaan waan hin galleefiif, bilbila hin taane bituun qisaasamni irra ga'aa jiraachuu dubbatu.
Kana hambisuuf maaltu taasifamuu qaba jennee hundeessaa fi daayirektara 'Oromo ICT' Abdiisaa Bancaa gaafannee turre.
Yeroo bilbila haaraan bitamu maaltu godhamu qabaata?
Bilbilli tokko yeroo hojjatamu lakkoofsa addaa kan dijiitii 15 qabuufi 'IMEI' jedhamu wajjiin hojjatama.
Lakkoofsa Koodii IMEI kana beekuuf lakkada (code) *#06# jechuun bilbila harkaa keenya irratti barreessinee yoo ergine baruu dandeenya.
Haata'uu malee, bilbilli fakkeeffamee hojjatamu ykn foorjiidiin lakkoofsa IMEI kana lakkoofsota mobaayila biroo qabate hojjatamuu waan danda'uuf, netwarkii 'ethio telecom' keessatti namni bilbila akkas fakkeefamee hojjatame yoo bitate hojiin ala ta'a jechuudha.
Ethio-telecom jalqabuma yeroo tajaajila eegaluuf jedhu, qafoo fakkeeffame (copy) network isaa keessatti amma tajaajilaa jiru kan addaan baase ta'uuu yoo ibsamu, baayyinni isaaniis naannoo miiliyoona 2.8'ti jedhameera.
Namootni gosa bilbiloota kunneenii qabatanii jiraniif dhaabbanni ethio telecom turtii yeroo waggaa tokkoo qofaaf hayyama laateefii jira. Turtii waggaa tokkoo booda bilbilli Foorjiidiin kunneen network ethio telecom keessatti akka hin hojjanne ibsameera.
Kanaafuu ammaan booda qafoo bilbila mobaayilaafi kanneen biroo networkii ethiotelecom fayyadamuuf yoo bittan maallaqni keessan akka hin qisaasamne yookaan hin nyaatamne neetworkii ethiotelecom irratti kan galmaaye ta'uu dursitanii adda baafachuu qabdu.
Kana adda baafachuuf tartiiba armaan gadii hordofaa:
1- Qafoo bituu barbaaddan sana keessa SIM card galchaa
2- *868# barreessaa bilbilaa. Yeroo kana filannoon 3 isiniif dhufa
1- Phone Unlock
2- Switch Unlock
3- Check Status kanneen jedhaniidha.
Check status isa jedhu filachuuf iddoo duwwaa nuuf dhufutti lakoofsa 3 barreessinee SEND jenna. Yeroo kanas filannoon lama nuuf dhufa.
1- By IMEI
2- By Phone number kan jedhuudha.
Sana booda 'By IMEI' isa jedhu filachuuf iddoo duwwaa irratti lakkoofsa 1 barreessinee 'SEND' jenna. Akkuma SEND cuqaafneen 'Enter IMEI' number kan jedhu nuuf dhufa. Yeroo kana lakkoofsa jalqaba irratti *#06# jennee baafne sana kan qafoo bituu barbaadnuu sana itti galchinee SEND isa jedhu cuqaafna.
Yeroma sana qafoo network ethio telecom keessatti hojjatuufi hin hojjanne ta'uu adda baafattu.
Kan gochuu hin qabne
Kana ta'uu baannan qafoon kun haaraadha, kaartooniinuu irraa hin hiikamne fi kkf jettanii bittanii kasaaruu dandeessu ofeeggannoo gochuu qabdu.
Osoo hin banamin dura sa'aatii sadiif 'charge' gootanii kaatanii achi booda fayyadamtu jedhamee yoo kan isinitti gurguramu ta'e, osoo hin banamin fuutanii galtanii booda yoo yaaltan networkii ethio telecom keessatti hin hojjatu ta'e, qarshii keessan kasaaruu dandeessu.
Gama kaaniin, namoonni kaan qarshii kanfalun karaa seeraan alaa karaa dhoksaan bilbila bansiisan akka jiran kan BBC'tti dubbatan mirkaneessaniiru. Kunis irra ga'amnaan kasaaraa biraaf waan nama saaxiludha.
Bilbila biyya alaatii bitame bansiisuuf paas portii waan dhabeef isaan bira akka dhaqe kan himu dargaggeessi maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne kun, Finfinnee naannoo Markaatotti tajaajila kana argadhe jedhe.
'Qarshii 600 kanfaleen hojjachiise. 500 isaanif 100 immoo nama isaan walitti na fideefan kanfale. Namoonni kaan achi dhaqanis jiru. Namoota hojjechiisan dallaalaan fidu.''
Kaffaltii bilbiloota biyya alaarraa dhufan ilaalchisee
Mobaayiloota biyya alaarraa galan ilaalchisee, namni mobaayila sana fide yoo jiraate, passport qabachuun buufataalee galmeef qophaa'anitti deemuun mobaayila tokko bilisaan galmeessisuu danda'a.
Tokkoo ol warri qaban ammoo kaffaltii gibiraa %45 raawwachuun galmeessisuu danda'u.
'Qulqullina sirboota duriitu qaba jedheen amana' – Guutuu Abarraa
Dhimmi mirga namoomaa ajandaa filannoo Itoophiyaa ijoo ta’uu qaba jedhame
Barataan Yunivarsiitii Jimmaa 'Jawaar hiikaa' jedhe maaliin shakkame?
Pireezidant Isaayyaas Afawarqii haala Itoophiyaa keessa jirurratti maal jedhan?
18 Guraandhala 2021
Filannoo biyyaalessaa keessaa bahu hin murteessine jedhe ABO’n
20 Guraandhala 2021
Namni nyaata malee guyyoota hangam turuu danda'a?
19 Guraandhala 2021
Itoophiyaan walitti bu'iinsa daangaa 'hammeessaa jirti' jechuun Sudaan balaaleffatte
Mana dhugaatii keessatti kutaa dhiqannaa jaarraa 12ffaa argame
Namtichi bishaan keessa bu'e sa'aatii 14f 'balfatti rarra'uun' lubbuun oole
Haati warraa poolisii hojjettuu manaa ishee dararuun ajjeesuu amante